Home » Lahatsoratra farany farany » Entertainment » Tsy mahavita clown intsony ireo sirkosy any Irlandy Avaratra
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Entertainment • Music • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Tsy ny olon-drehetra no te-ho fihomehezana fa ho an'ny olona ratsy tarehy, ny nofy ratsy indrindra dia ny tsy ihomehezana.
Ny tsy fahampian-tsiranoka avy amin'ny COVID-19 mahery dia mamely ny indostrian'ny boribory Irlandy Avaratra.
Ny mpanao hatsikana mitady dia mila manao zavatra bebe kokoa noho ny mandoko ny tenany fotsiny amin'ny fanaovana makiazy sy ny papier lobard hamenoana ireo kiraro be loatra amin'ny asany.
Ny maha-badina anao dia ny fahaizana mampihomehy ny tenanao - tsy resaka fihomehezana olona hafa izany.
Tsy ho ela dia hitety an'i Irlandy Avaratra indray ny sirkosy Sisiny COVID-19 milamina, fa raha ny tatitra vaovao Britanika dia miatrika tsy fahampian'ny clowns izy ireo, miaraka amina filoham-pirenena boribory mitady mafy hahita mpanao vaovao.
Amin'izao fotoana izao dia efa fantatry ny tontolo iray manontolo UKKrizy solika mitohy, saingy vitsy ny olona mahatsapa fa misy ihany koa ny tsy fahampiana badin-doza Northern IrelandFielezana.
Betsaka amin'ireto mpanakanto ireto no niverina tany amin'ny fireneny ihany tamin'ny fiandohan'ny areti-mandringana COVID-19 tamin'ny taon-dasa, na nanomboka tany ivelany mba hitady asa any amin'ireo firenena efa nisokatra.
Sarotra ny fizotran'ny visa ho an'ny badin'ny tsy EU, dia manandrana manatratra ireo olona ao an-trano izay manana izany fa afaka manome izany ny tompon'ny boriborintany.
Ny mpanao hatsikana mitady dia mila manao zavatra bebe kokoa noho ny mandoko ny tenany fotsiny amin'ny fanaovana makiazy sy ny papier lobard hamenoana ireo kiraro be loatra amin'ny asany. Raha ny filazan'ny tompon'ny boriborintany iray, rehefa miditra amin'ny peratra boribory ianao ary manana olona 700 ka hatramin'ny 800 mijery anao, na manao ahoana na manao ahoana toe-po misy anao dia mila manazava izany peratra boribory izany ianao. Tokony ho afaka hamaky ny mpihaino anao ianao, ao anatin'ny minitra fohy dia tokony ho afaka hanana rapport miaraka aminy ianao ary hifandray sy hamahana azy ireo.
Na dia manoratra ny tenany aza ny vazivazy, tsy raharaha ihomehezana ny raharahan'ny filalaovana, hoy kosa ireo matihanina amin'ny indostria: “Tsy ny olona rehetra no te hihomehezana fa ho an'ny olona iray badina, ny nofy ratsy indrindra ataonao dia ny tsy ihomehezana. “
"Tokony ho afaka ny hanesoeso ny tenanao ianao, tsy ny haneso ny olon-kafa no tokony hataonao."
Fitakiana vaksiny vaovao any Canada
Nampitsahatra ny roa ampahatelon'ny Britanika tamin'ny...